Waxaad Tahay Shaqsiggii Dunidda Wax Ka Bedeli Lahaa. Sidee Ku Dhacday..!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 5, 2017, 3:13 pm
Bismillaah, dunidda nagu wada heeraarsan aad u jeedo rag ayaa u kacay oo siddaan ka dhigay. Waxaa xaqiiq ah maqaalkaan aan qoraayo inaad aqrisani karto adigoo joogo gurigaaga waliba adigoo sariirtaada saaran, waa tusaale kamid ah horumarka dunidda ay ku tilaabsatay.
Shaqsiga maqaalkaani aqrini karo waa shaqsi yaqaano magaca Soomaaliyeed, waxaana jira Soomaali badan oo niyadda ka jabsan waqtiyadaan dambe, sawabtoo ah waxaa niyad jabiyay qaabka ay dunidda u socoto waqtiyadaan dambe. Inta badan, dowladaha reer galbeedka qaarkiis waxay aad u daba dhigteen diinta Islaamka iyo xijaabka ay qaataan dumarka Muslimiinta. Waa nooc ka mid ah dhaawac iyo dagaalka lagulla jirao dadyawga Muslimka ah ee caalamka kunool.
Mawduucaan kuma saabsano inaan ka hadlo xijaabka iyo dadyawga Muslimiinta caalamka, ee wuxuu salka ku hayaa inaan ka hadlo sidda ugu wanaagsan ama waxyaabaha ku horyaallo ee lagaaga baahanyahay inaad qabato waqtiyadaan la joogo.
Hadaba adiga maxaa ku horyaallo?
Dunidda marwalbo waxay sii galaysaa marxallado kalla duwan sidda dhibaatooyinka sii kordhaayo ee maanta dunidda ka dhacaayo, balse waxaa wanaagsan inaan isweydiino marwalbo sidda aan ugu bad-baadi karno dhammaan dhibaatooyinkaasi. Wey adagtahay inaad kawada bad-baado dhammaan dhibaatooyinka jirra.
Waxaa loo baahanyahay inaan la imaano waxqabsi iyo inaan noqono dad wada midaysan. Dadyawga Soomaaliyeed waxaa kala qeybiyay jaahilnimo. Jaahilnimada markii ay kaaga dhacdo xagga diinta ayaa ugu daran. Maxaa yeelay waxaanu wada nahay dad Muslimiin ah hadana wali waxaan caabudnaa qabyaaladda. Jaahilnimadaasi waxay kaloo kasbatay inaan kasbani weyno dowlad midaysan oo shacabkeeda ogal, waana sawabta keentay inaan noqono dad kala qeybsan marwalbo oo aanan aaminsaneen dowladnimada.
Maxaa keenay in shaqsiga Soomaaliyeed uu aamini waayo dowladnimada?
Waxaa keenay markii horeba waxay kusoo barbaareen meel aanan ka jirin dowlad iyo kala dambeen. Qofka waxaa marwalbo saameeyo deegaanka uu kusoo koro. Shaqsiga Soomaaliyeed marka wax laga sameeyo ama laga gardaranyahay dowlad wax la qabato ma uusan soo arkin, waxaana xaqiisa usoo dhiciyo waa qabiilkiisa oo kali, waana sawabta keentay innuu aamino qabiilkiisa halka uu aamini lahaa dowladnimada, marka dad badan ayaa wali la yaabsan sawabta Soomaalida wali ay u aaminsanyihiin qabyaaladda. Qofka markuu waayo cid xaqqiisa usoo dhiciyo wuxuu aamini doonaa cidda usoo dhiciyo xaqqiisa ama daryeesho. Si qofka uu u aamino dowladnimada waxa ay tahay waa in dowlada dalkeena ka jirto u dir nacdaa shacabkeeda.
Dhammaanteena waxaa na horyaallo waa wax iska cad, loomana baahno inaan meelkale wax ka raadino, waxa loo baahanyahay inaan maanta qaadno wadaddii aan wax badan ku bedeli lahayn.
Hadalkii oo kooban waxaa na horyaallo labo shey oo muhiim ah:
Wax wada qabsi
Koow, wax wada qabsi, bini’aadmka isku karti ma ahan, isku dadnimana ma ahan. Si ummada Soomaaliyeed ay u noqdaan ummad wax wada qabsado waa inay noqdaan kuwa iscaawiyey oo wax wada qabsada. Midkeena liita haddii aan wax u sheegno oo aan kor usoo qaadno anagoo aanan fiirinaynin kansarka ka jira dalkeena “qabiil” waan wada guulaysani karnaa. Kaligaa guul waxbo kuuma tarayso, haddii walaalkaa guuldareystay ama dhibaataysanyahay.
Labo, ismaqal, in bini’aadamka ismaqlo waa waxyaabaha guusha lagu gaari karo. Waa wax aad u wanaagsan inaad fahanto dadka adiga kugu heeraarsan. Bulshada horumar ma gaarto illaa iyagu dhexdooda ismaqlaan mooyee. In la isdhageysto waxay muhiim u tahay shaqsiyada dadnimo iyo in bulshada fahmaan dhibaatada haysato halka ay ka imaanayso iyo sawabta waxa keenay.
Gunnaanad, waxaa loo baahanyahay inaan la imaano isbedel. Waa inaan wax badan ka bedelnaa nafteena si aan “Role model” ugu noqono dadyawga kale ee caalamka. Haddii aan noqono dad midaysan oo danteena ka wada shaqeyno waxaa suurta geli karo inaan noqono dad mustaqbal fiican leh. Waxaad tahay qofkii dunidda wax ka bedeli lahaa balse haddii aad isku qaadato inaadan waxbo bedeli Karin adiga ayaa isliiday.
1 Maxay kulla tahay?